नेप्से स्थिर, दुई घण्टामा ७९ करोडभन्दा बढीको कारोबार (१ बजेको अपडेट)
भदौ ३०, काठमाडौं । मंगलवार दुई घण्टाको कारोबारमा नेप्से स्थिर बनेको छ । यस अवधिमा परिसूचक शून्य दशमल शून्य १ प्रतिशत बढेर नेप्से १ हजार ५४० दशमलव ६९ विन्दुमा कायम भएको हो । सोमवार नेप्से १ हजार ५४० दशमलव ५१ विन्दुमा बन्द भएको थियो ।
मंगलवार दुई घण्टाको अवधिमा नेप्से परिसूचक सोहि विन्दुमा कायम भएको हो । यस दिन १ हजार ५४४ दशमलव ७२ विन्दुदेखि खुलेको बजार १ हजार ५४८ दशमलव ३५ विन्दुसम्म पुगेको थियो । दुई घण्टाकामा १८७ कम्पनीको रू. ७९ करोड २१ लाख १३ हजार बराबरको २४ लाख ४० हजार ४४३ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ ।
यस अवधिसम्म कारोबारमा आएका १२ ओटा समूहमध्ये विकास बैंक, वित्त, निर्जीवन बीमा, अन्य र लघुवित्त समूहको परिसूचक घटेको छ भने बाँकी समूहको बढेको छ । मंगलवार दुई घण्टाको कारोबारमा व्यापारिक समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी शून्य दशमलव ४९ प्रतिशत बढेको हो ।
दुई घण्टामा सर्वाधिक रकमको कारोबार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको भएको छ । उक्त कम्पनीको रू. ५ करोड ४६ लाख ९४ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । यस दिन दिव्यश्वरी हाइड्रोका शेयरधनीहरुले सर्वाधिक कमाएका छन् । दिव्यश्वरीको शेयरमूल्य १० प्रतिशत बृद्धि भएको हो ।